Faalo: Sababaha ay u dhaqan geli La`dahay dowlad soomaaliyeed
University of Gävle-Sweden
Sida ay la socdaan inta badan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka gudahiisa iyo dibadiisaba, waxaa gebagabo ku dhow shirkii soomaalida uga socdey dalka Kenya. Iyadoo hadda la gaarey dhaarintii xildhibaano-beeleedyadii la soo bandhigay. Guud ahaan dadka soomaalida ah ayaa waxaa ay u hanqal taagayaan natiijada ka soo baxda shirkaas. Rajada dadku waa mid ku wajahan helitaanka dawlad soomaaliyeed, ka dib kolkii umadda dagaal iyo fowdo qoto dheer lihi aafeeyeen. Rajadaan iyo laab la kaca noocan ahi waxaa ay soo baxaan kolkasta oo la qabto shir lagu baadi goobayo dowlad soomaaliyeed. Kolkii lagu dhawaaqay in qayb ka mid ah baarlaamaanka cusub la dhaariyey ayaa waxaa ka dhacay meelo badan oo dadka soomaaliyeed ay ku nool yihiin dabaaldegyo iyo hadalhayn ku saabsan in soomaliya dowladi u dhalan doonto. Balse suàasha aan weli la isweydiin waxaa weeyaan: Maxay u dhaqan geli la`dahay dowlad kasta oo soomaliya loo dhisaa? Haddii baarlamaankii lagu guuleystey maxay wax walbaa u socon waayeen?
Haddii a suàalahaas aan kor ku xusay ka faaloodo. Waxaa jira arin muhiim ah kolkii la xalinayo mushkilad, taasoo aduunka intiisa badan ay isticmaalaan. Arintaasi waxaa weeyaan kolkii dhib la xalinayo, waxaa haboon in marka hore la aqoonsado halka ay dhibtu ka soo butaaceyso. Maxaa yeelay hadii la helo ilsha dhibaatada, waxaa sahlan in la diyaariyo qaabkii iyo qalabkii lagu xalin lahaa dhibtaas. Taas waxaa aan ula jeedaa dhibaatada hor taagan dowlad soomliyeed waxaad moodaa in aan weli si rasmi ah loo aqoonsan. Mushkilada hor taagan dowlad soomaaliya loo sameeyaa waa mid ka timaada xagga dhaqan gelinta.Dowlad waa la dhisi karaa balse dhibku waxaa uu inaga haystaa sidii ay u shaqeyn lahayd dowladaasi. Taasna waxaa u sabab ah arimo dhowr ah.
· Qaabdhismeedka dowladeed oo qaldan: Waxaa ugu horeynba qaldan qaabka dowlada lagu soo dhisay, kolkii lagu saleeyey qaab qabiil ee aan lagu saleyn qaab fikir ama gobol. Qaab-qabiileedku waxaa uu keenay in qof kasta oo baarlamaanka ama dowlada soo galaa uu wakiil ka yahay afkaartii ay qabeen qabiilkiisu. Afkaartaasuna ay ahaayeen kuwii kolkii horeba ka qayb qaatay burburkii qarankii soomaaliyeed.
· Dano shaksiyeed: Waxaa iyaguna jira dad ay dani ugu jirto fowdada soomliya ka jirta. Danahaasuna waxaa ay u badan yihiin kuwo dhaqaale. Dadkani waxaa ay ka cabsi qabaan in lala xisaabtamo haddii la soo celiyo nidaamkii iyo kala dameyntii.Waxaa iyana jira kuwo kale oo ka cabsi qaba in wax laga weydiiyo dambiyadii iyo xadgudubkii ay galeen. Halkaan waxaa soo gelaaya qabqablayaasha dagaalka iyo gacan-hayayaashooda. Hogaamiyayaasha dagaalku waxaa ay caan ku yihiin iney ka hor yimaadaan dhaqan-galka dowlad kasta oo aan dantooda wadin.Qaar ka mid ah nimankaas ayaa waxaa ay mar hore ku dhawaaqeen in aan hubkooda la tirin doonin, iyagoo aan marka hore ogaan qaabka ay dowlada la soo dhisaa yeelan doonto. Taas macnaheedu waxaa weeyaan, in haddii ay ka waayaan danahooda gaarka ah ay ka hor iman doonaan dowlada la soo dhiso. Xoogagaan aan xusnay waxaa ay aad ugu dadaalayaan in aan marna dowlad soomaliyeed la helin si ay ugu noolaadaan dhiiga dadka aan waxba galabsan.
· Dowlado shisheeye: Dowlado dhowr ah oo shisheeye ayaa iyaguna ka mid ah caqabadaha ay dowlad soomaaliyeed la dhaqan geli la`dahay. Dowladahaasi waa kuwo dano gaar ah leh, una arka soomaliya iney tahay wadan kula tartami kara ilaha dhaqaaalaha yar ee gobolka ka jira. Waxaa kaloo ay cuskanayaan muran soo jireen ah oo u dhexeeyey soomaaliya iyo dowladahaas. Qodobkan ma aha mid aad u dhib badan, oo waa laga guuleysan karaa haddii la saxo qodobada kale ee aan kor ku soo sheegnay.
· Wadaniyad xumo: Qodobkan waa mid waayadaan dame aad ugu soo baxay shicib weynaha soomaaliyeed. Waxaadna taas si toos ah u dareemi kartaa kolkii aad la sheekeysato ama dhex gasho soomaalida intooda badan. Waxaad arkeysaa in qof walbaa xiiseeynaayo gobolkii uu ka yimid, balse aanu dan sidaas ah kalahayn waxyaalaha ka dhacaaya gobolada kale ee soomaaliya. Shicibku waa dad aad u awood badan hadii uu caafimaad qabo. Taas waxaa kuu cadeyn kara in dowladu badan oo aduunka ah ay rideen shicib. Iyadoo aan loo adeegsan wax hub ah haba yaraatee. Haddaba haddii shicibka soomaaliyeed u istaagaan iney dhaqan geliyaan dowlad soomaaliyeed, waa ku guuleysan karaan. Aad beyna awoodoodu uga xoog badan tahay, kuwa kale ee aan soo sheegnay.
Wax dood ahi kama taagna in dadka iyo dalka soomaaliyeedba uu u baahan yahay dowlad. Balse waxaa iyana haboon ineynaan laablakac ku shaqeyn, ee aynu waxwalba u fiirino si aasaasi ah. Taas waxaa aan ula jeedaa iyadoo aan qodobada kor ku xusan la falanqayn waxna laga bedelin, ineyan suurto gal ahayn dhaqangalka dowlad soomaaliyeed. Xitaa haddii aan wax laga wada qaban karin, waxaa haboon in haddii aynu nahay shicibka bal waxuun isku dayno si loo helo dowlad soomaaliyeed oo waarta. Haddii arimahaas aan soo sheegay sida hadda ay yihiin loo daayo, waxaa ay dowlada kenya lagu soo dhisaa qaadeysaa wadadii ay qaadeen dowladihii ka horeeyey. Tusaale dowladii carta lagu soo dhisay ayaa kuugu filan.